“မျက်ရည်ခိုင်မှ နားထောင်ပါ။ ကိုဇာနည်အောင် သေနတ်မှန်ပြီး မသေခင် အမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြောနေတဲ့ အသံဖိုင်”
“မျက်ရည်ခိုင်မှ နားထောင်ပါ။ ကိုဇာနည်အောင် သေနတ်မှန်ပြီး မသေခင် အမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြောနေတဲ့ အသံဖိုင်” သီပေါအထွက်မှာ သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရတဲ့ ကားသမားတစ်ဦး နောက်ဆုံးအချိန်မှာ မိခင်နဲ့ လူမှုကူညီရေး အသင်းကို ကိုယ်တိုင်ဖုန်းခေါ်ဆို 1.6.2019 မှာသီပေါမှ ကိုဖက်တီး (ခ) ကိုဇာနည်အောင် ဆုံးတာ တလပြည့်ပါပီး တလပြည့်အိမ်ရောက်တုန်း […]
“ယောကျာ်လေးများ ဖတ်ရန် ( အိမ်ထောင်ဖက် ယူမှာလား ၊ အိမ်ဖော် ယူမှာလား ) ?”
ယောက်ျားတစ်ယောက် သူ့အဝတ်သူ လျှော်နေတာတွေ့ရင် လူတွေက “မိန်းမယူ လိုက်ပါလား၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မလျှော်ရတော့ဘူးပေါ့” လို့ပြောမယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက် ထမင်းဟင်း ချက်နေတာမြင်ရင် လူတွေက “မိန်းမယူလိုက်ပါလား၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မချက်ရတော့ဘူးပေါ့” လို့ပြောမယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ယောက်ျားတစ်ယောက် သူ့အတွင်းခံသူ မလျှော်တတ်၊ သူ့ကော်ဖီသူ ဖျော်ဖို့ […]
“အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲ ဘဝ က အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ် …”
ငိုနေလဲ …….. တိတ်ပါ ပြောရုံပဲရမယ် ..၊ လွမ်းနေလဲ ……….. အာဘွား လို့ အလွမ်းခြွေရုံပဲ.. ၊ အမှတ်တရနေ့တွေ …… သူများတွေ ပျော်မြူးချိန် တယောက်ထဲ …… ယောင်ပေ ယောင်ပေနဲ့ ငိုချင်လဲ ……. ကျိတ်ပြုံးနေရတာတွေ ရှိတယ်..၊ ဘုရားအတူသွားချင်လဲ ………. […]
“ပင်လယ်ပြင်က မုန်တိုင်းထဲမှာ အဘအောင်မင်းခေါင် ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ကပ္ပတိန်ကြည်ရှိန်”
*ကျွန်တော့်အမည်က ဦးကြည်ရှိန်ပါ။ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောမှာ ကပ္ပတိန်ရာထူးအထိ ထမ်းဆောင်ဖူးတာကြောင့် ကပ္ပတိန်ကြည်ရှိန်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ Omic Myanmar အုပ်စုရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်ပါတယ်။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးပါ။ *ကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့သင်္ဘောဟာ ပနားမားနိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စိဖိတ် သမုဒ္ဓရာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံကို အသွားမှာ မုန်တိုင်း သတိပေးချက် တစ်ခုကို […]
လက်ပံတို ရေနံမှော်မှ “ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) ဆုရှင်” မိသားစုလေး
လက်ပံတို ရေနံမှော်မှ “ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) ဆုရှင်” မိသားစုလေး “ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) ဆုရှင်” (၄) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲတွင် မြတံခွန်အောင်သန်းဆု ထီဆိုင်မှ ကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) ဆုကြီးအား ကိုမိုးဝင်းဇော် + မစန်းယုမော် သား- မောင်မိုးစက်ပိုင် (လက်ပံတို ရေနံမှော်) မှ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါပီ။ […]
“မြန်မာနိုင်ငံက စာသင်ကျောင်းမှာ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အမေရိကန်က ဆရာမလေး မိသားစု”
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သနပ်ပင်မြို့ အ.ထ.က ကျောင်းဝင်းအတွင်း အမေရိကန် ဆရာမလေး Abby Hester ရဲ့အဖွားနဲ့မိသားစုလှူဒါန်းတဲ့၃၀ပေ×၉၀ပေ၂ထပ်ကျောင်းဆောင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ၊ ကျောင်းဆောင်သစ်မှာ လျှပ်စစ်မီး မပါလို့ ၂၇ကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲမှ လျှပ်စစ်မီးအတွက် ကောက်ခံထားတဲ့အလှူရှင်တွေရဲ့ အလှူငွေရယ် မြို့မိမြို့ဖများထံမှ အလှူငွေ၎သိန်းရယ် မီတာ ၁လုံး အသစ် […]
သားအဖသုံးယောက် ဂစ်တာ တီးပြီး သံစဉ်လေးနဲ့စီးမျောရင်း က နေကြတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ ဗီဒီယ်ိုဖိုင်
သားအဖသုံးယောက် ဂစ်တာ တီးပြီး သံစဉ်လေးနဲ့စီးမျောရင်း က နေကြတဲ့ လင်းလင်းရဲ့ ဗီဒီယ်ိုဖိုင် နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းဟာဆိုရင် သမီးလေး အမွှာတွေဖြစ်ကြတဲ့ မေမြန်မာခေတ် နဲ့ မေမြန်မာ သစ်တို့နဲ့အတူ ပရိသတ်တွေကို ဆော့နေကြတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြလေ့ရှိသူပါ ။ သမီးလေးတွေကို အမြဲအချိန်ပေးပြီး […]
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ပြုသင့်တဲ့ ကုသိုလ်
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲပြီး ဒုက္ခရောက်နေသူများ ပြုသင့်တဲ့ ကုသိုလ် အရှင်ဘုရား ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်သူများ၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လို ကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲဘုရား။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ ပုညကြိယ ၀တ္တုဆယ်မျိုး (ကောင်းသော အကျိုး၏ […]
ချစ်တဲ့,…ပရိသတ်တွေအတွက် …လိမ္မာအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ …ပိုင်တံခွန်
ချစ်တဲ့,…ပရိသတ်တွေအတွက် …လိမ္မာအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ …ပိုင်တံခွန် ပိုင် တံ ခွန် က သူ့ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဝေဖန်ပြောဆိုကြမှာစိုးတဲ့အတွက် လိမ္မာအောင်ပိုကြိုးစားမယ်လုိ့ ဆိုပါတယ်။ သူက လက်ရှိမှာတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်အချစ်တွေကို အများကြီး ပိုင်ဆိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ပိုင် တံ ခွန်က ပရိသတ်တွေအတွက် လိမ္မာအောင်ကြိုးစားနေထိုင်တယ်လုို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုနေလိုက်တာကလည်း သူ့ရဲ့ […]
“(4) ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှာ..သိန်း ၅၀၀ ဆု​ပေါက်​သွားတဲ့ တပ်​သား​လေး”
(4) ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှာ..သိန်း ၅၀၀ ဆု​ပေါက်​သွားတဲ့ တပ်​သား​လေး အောင် ဘာ လေ ထီ သိန်း ၅၀၀ ဆု ပေါက်သွားတဲ့ ကံထူးရှင် တပည့် ကျော် ကွန်ဒီ ၁၇. တသ မင်းမိုးသက်ထွေး ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ပေါက်ပါတယ် ထပ်တူ […]